Ii-capitulars kunye neentlobo zazo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Bayabizwa capitulars oonobumba abakhulu abakhulu ababekwe ekuqaleni kwe imihlathi. Kuya kufuneka sazi ukuba kwi capitulars, Oonobumba abanjengo-Q okanye u-J banokusinika iingxaki ezithile ngenxa yoyilo lwabo.
Zintathu iintlobo ezahlukeneyo ze capitulars, ii-capitulars eziphakamileyo, ii-capitulars eziqhekekileyo kunye nee-capitulars eziweleyo.
Yeyona ilula kwaye inika ezona ngxaki zincinci. Yenziwe ngokunyusa ubungakanani be Incwadi Yokuqala. Ukuba sinayo izithuba zomgca ngokuzenzekelayo, indawo ezakushiyeka ngezantsi izakuba yindawo yoonobumba abakhulu. Ukuba isinika iingxaki, kuya kuba ngcono ukusebenzisa isithuba ngesandla.
Kule meko i thetha Ihlala kwimigca eliqela imiyalezo kwaye kufuneka ibe kwindawo ephezulu elungelelaniswe nolungelelwaniso oluphezulu, kwaye ngezantsi kunye nesiseko somgca wokugqibela ekuhlalwa kuwo.
Kule meko, phakathi thetha kunye nemigca esekunene kuyacetyiswa ukushiya isithuba phakathi kwe-6 pt kunye ne-12 pt.
Yeyona ihlala inika eyona ngxaki inkulu xa isiza ubekonjengoko kuxhomekeke kwileta ekuthethwa ngayo. Kolu hlobo, i imiyalezo Ekunene kwe thetha ihamba ngayo ngohlobo lwayo. Kwiimeko ezinje ngo-A okanye ngo-W, indlela ilula, kodwa ngoonobumba abathe nkqo njengo-N, indlela ayizukuqwalaselwa kwaye iya kujongeka njengekepusi ediliziweyo.
imifanekiso: iintlobo ezisemthethweni
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Ii-capitulars kunye nohlobo lwazo